အမျိုးသားညီညွတ်‌ရေးအစိုးရ… – PVTV Myanmar
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမိုးဇော်ဦးနှင့် သီးသန့်အင်တာဗျူး
Like – 5.5K Share – 712
2021-04-26 at 10:12 PM
CDMပါဝင်လို့ သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသိမ်းခံထားရသော ဝန်ထမ်းများကိုဘယ်လိုကူညီမှုရှိပါသလဲ
စစ္ေရးအရ ေျဖးရွင္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ထင္တယ္
သ ဒ္ဓါ says:
မန်းလေးမှာ ဒီညနေ 7:00 ဝန်းကျင်လောက်က
41 လမ်း စိန်ပန်းလမ်း(91လမ်း) မှာ ထမင်းကြော်ရောင်းနေတဲ့လူကို
သေနတ်နဲ့ပစ်သွားတာ ကျောကိုထုတ်ချင်းပေါက်ပြီး ကျဆုံးသွားရရှာပြီ။
Saw Win Moe Kyaw says:
2021-04-26 at 10:29 PM
2021-04-26 at 10:31 PM
2021-04-26 at 10:32 PM
2021-04-26 at 10:39 PM
ပြည်သူ့ အစိုးရ NUG အောင်မြင်ပါစေ။ ဘေးကင်းပါစေ။
အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မည် ။
2021-04-26 at 10:44 PM
ASEAN က NUG ကို အစိုး အဖြစ် သဘောမတူရင် ASEAN က နုတ်ထွက်သင့် တယ်
U Tin Mg Lwin says:
2021-04-26 at 10:47 PM
2021-04-26 at 10:52 PM
Moe Ju Nagl says:
2021-04-26 at 10:53 PM
ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ပါ၊ လက်တွေလုပ်ဆောင်မူတွေရဲ့နောက်မှာမှ နိုင်ငံတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မူ့ ရလာမှာပါ၊ ကိုယ်ဘက်ကလက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မူ့ရှိအောင် အရင်ကြိုးစာရပါမည်၊
ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေက ကြိုမြင်လို့ CRPH and NUG ကိုထောက်ပြနေတာ၊ NUG အစိုးရမှာလိုအပ်နေတာက ဖွဲ့စည်းပုံပဲ၊ အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ ရေးဆွဲပြီးသားအသင့်ရှိထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒုတိယ မူကြမ်းကို အတည်ပြုဖို့ အတော်ခက်နေတယ်ထင်တယ်။ ဒါဆိုလဲ ဖွဲ့စည်းပုံကိုချပြဖို့ ရှိလားလို့ မေးစရာရှိလာတယ်။ ရေဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်အများကြီးယူရအုံးမယ်။ တချို့တွေကမြင်လို့ ပြောရင် လက်မခံချင်ကြဘူး။ ဘယ်လောက်အထိအချိန်ယူမလဲဆိုတာပဲ စောက်ကြည့်ရတော့မယ်။
Khin Ya Di says:
2021-04-26 at 11:10 PM
2021-04-26 at 11:11 PM
မအလကတော့ အာစီယံကို တကွက်နင်းလိုက်ပြီး
2021-04-26 at 11:20 PM
NUG ရဲ့ ဆောင်ရွင်ချက်တွေကို အပြည့်ဝထောက်ခံပေးနေတာမို့ လုပ်စရာရှိတဲ့ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို နောက်ဆံမနင်းပဲ ရှေ့ကိုပဲ ဆက်တိုက်တိုးလုပ်သွားပါ ပြည်သူတစ်ရပ်လို့ ရပ်တည်ပေးနေပါတယ်
2021-04-26 at 11:23 PM
Hau ZaKam says:
No more need to talk.
china and asian play game
AmayThway AmayThar says:
2021-04-27 at 7:40 AM
Myat Nay Min says:
2021-04-27 at 9:19 AM
အာဆီယံသည် ပြည်သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ပါ စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေသာဖစ်သည်
2021-04-27 at 9:28 AM
We,Myanmar Citizens fully support National Union Government.
2021-04-27 at 10:03 AM
2021-04-27 at 11:54 AM
It is ironic that the affair of the country who is fighting for the Democracy has been intervened by non-Democratic Countries, Russia, China and some of the ASEAN countries.
Simply unacceptable acts.
2021-04-27 at 3:21 PM
ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောသူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်